သင်သည်သင်၏မဖွယ်မရာစိတ်ကူးယဉ်နှစ်သက်နိုင်သည့်မှတဆင့်နည်းလမ်းများစွာရှိပါသည်။ မိသားစုပုံစံတွေပါဝင်တဲ့ညစ်ညမ်းရုပ်ရှင်တွေတန်ချိန်များစွာရရှိပြီးဒီယုတ်မာတဲ့အကြောင်းအရာတွေပါဝင်တဲ့ဝက်ဘ်ပေါ်မှာအီလစ်စာပေတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်။ သင်တို့အဘို့သင်၏အမေသို့မဟုတ်သမီး၏အခန်းကဏ္ဍကိုကစားရန်ဆန္ဒရှိနေသောပင်တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှကုရ်အာန်မော်ဒယ်များရှိပါတယ်,ဒါပေမယ့်သင်သူတို့အားကုရ်အာန်အပေါ်အများကြီးဆပ်ဖို့ရှိသည်လိမ့်မယ်။ သို႔ေသာ္ထိုဇာတ္လမ္းမ်ားသည္ပို၍ယံုၾကည္စရာေကာင္းေသာဇာတ္လမ္းမ်ားျဖစ္သည္။, အဆိုပါဇာတ်ကောင်အတူတူမိသားစု၏အဖွဲ့ဝင်များအဖြစ်ဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ပါသည်,သူတို့အမှီရသောအခါ,သူတို့အကြားတင်းမာမှုနောက်ဆုံးတော့စနစ်တကျသင်၏မဖွယ်မရာစိတ်ကူးယဉ်စိတ်တော်ပါလိမ့်မယ်။
ကောင်းပြီ၊ငါပြောရင်ဘာလဲဆိုတော့သင်ဟာအခမဲ့ဟိန္ဒူဘာသာ ၀ င်ဂိမ်းများစုဆောင်းခြင်းနှင့်အတူစိတ် ၀ င်စားဖွယ်စိတ်ကူးယဉ်မှု၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်။ ကျနော်တို့ကဒီမှာရှိသည်သောဆိုက်ကိုသင်ပျော်စရာအချိန်များအတွက်လိုအပ်သမျှနှင့်အတူကြွလာခြင်းဖြစ်သည်။ အဆိုပါဂိမ်းအသစ်မျိုးဆက်မှဖြစ်ကြသည်။ ဒီလာမယ့်လိင်အများကြီးပိုကောင်းဂရပ်ဖစ်နှင့်တိုးတက်လာသောရွေ့လျားမှုအင်ဂျင်နှင့်အတူလာမယ့်ဖြစ်ပါတယ်,သင်သည်သင်၏စိတ်ကူးယဉ်အားလုံးရှုထောင့်ကျော်ထိန်းချုပ်မှုပေးသည်တစ်ဦးထက်ပိုလွတ်လပ်စွာဂိမ်းကစားဘို့ခွင့်ပြုထားပါသည်. ထိုထိပ်တွင်ဂိမ်းများကိုမည်သည့်ကိရိယာတွင်မဆိုကစားနိုင်သည်၊၎င်းတို့သည်သင်၏ဘရောက်ဇာသို့တိုက်ရိုက်ပြေးနိုင်သည်။, သင်မိုဘိုင်းပေါ်တွင်သူတို့ကိုကစားချင်တဲ့အခါသင်တိုးချဲ့မှုမဆိုကြင်နာမလိုအပ်ပါဘူး။ ကျနော်တို့ကတကယ်တော့သူတို့တစ်တွေပျော်စရာအချိန်များအတွက်လိုအပ်သမျှနှင့်အတူလာကြောင်းသေချာအောင်ဒီဆိုက်အပေါငျးတို့သဂိမ်းများကိုစစ်ဆေးပါတယ်။ သငျသညျအရာခပ်သိမ်းသည်ဤပလက်ဖောင်းပေါ်မှာရှိနိုင်ပါသည်ဘယ်လောက်ကြောက်မက်ဘွယ်အားဖြင့်အံ့သြလိမ့်မည်။ ရဲ့ဆိုက်၏စုဆောင်းမှုမှာကြည့်ကြရအောင်ပြီးတော့ကျနော်တို့ဆိုက်သူ့ဟာသူအကြောင်းပိုမိုစကားပြောပါလိမ့်မယ်။
ဒီဆိုက်ကိုဖန်တီးလိုက်တဲ့အခါမှာဧည့်သည်တွေရဲ့စိတ်ကူးယဉ်မှုတွေကိုနှစ်သက်ဖို့မတူညီတဲ့မဖွယ်မရာပြုမှုအမျိုးမျိုးကိုလိုအပ်လာမယ်လို့သိရပါတယ်။ ဒါကြောင့်ငါတို့သည်သင်တို့ရှိစေခြင်းငှါလူအပေါင်းတို့သည်မဖွယ်မရာစိတ်ကူးယဉ်ဖုံးသောအမျိုးအစားစာရင်းကိုအတူတက်လာရန်သေချာပါစေ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုက်တွင်လူကြိုက်အများဆုံးသောစွဲမက်ဖွယ်ဂိမ်းများသည်လီလီမိန်းကလေးများသည်သူတို့၏ကြီးမားသောညီအစ်ကိုများနှင့်သူတို့၏ဘိုးဘေးများကိုသွေးဆောင်ဖြားယောင်းသောသူများဖြစ်သည်။ ကရှင်းပြသည်ဒါကြောင့်. ဒါပေမယ့်တစ်ချိန်တည်းမှာငါတို့လည်းသူ့မေမေ၏ကြှနျတေျာ့သူလေးအဖြစ်ကစားနိုင်သည့်အတွက်ဂိမ်းများရှိသည်။, ကျွန်ုပ်တို့တွင်ဤအမျိုးအစားတွင်ကြီးမားသော ၀ တ်စုံများနှင့်အတူများစွာသော ၀ တ်စုံများရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုက်တွင်ရှိသည်နောက်ထပ်အမျိုးအစားလိင်တူချစ်သူကစားသမားများအတွက်လာမယ့်။ သင်အမှန်တကယ်ညီအစ်ကိုနှင့်ဖေဖေ-သားစိတ်ကူးယဉ်မှုအပေါ်အစ်ကိုပျော်မွေ့နိုင်သည့်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုက်တွင်လိင်တူချစ်သူမပျောက်ပျက်ရေးစိတ်ကူးယဉ်မှုများကိုကစားနိုင်သည်။ မသာကြောင်း,ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့အစ်မအရေးယူနှင့်မေမေ-သမီးဆိုးဆိုးဆိုးညစ်ညစ်ညစ်အပေါ်အစ်မရှိပါတယ်အတွက်လိင်တူချစ်သူအရေးယူနှင့်အတူလာမယ့်,ကွီးမွတျဂိမ်း၏ပြောင်းပြန်ရှိသည်။
သို့သော်ထိုသူအပေါင်းတို့ထိပ်ကြောင်းဂိမ်းအမျိုးအစားရှိပါတယ်။ ကာတွန်းရုပ်ပြောင်ဂိမ်းများ၏ရွေးချယ်ရေးအကြောင်းပြောနေတာပေါ့,အားလုံးသင်အကြိုက်ဆုံးကာတွန်းစီးရီးထဲကဇာတ်ကောင်ယူပြီးနှင့်ဆက်စပ်နေသောမုတ်ဆိတ်မွှေးနှင့်စကပ်သို့သူတို့ကိုငါလှည့်သော. အားလုံးသင့်ရဲ့ကာတွန်းစိတ်ကူးယဉ်အခမဲ့ကြံ့ကြံ့ခံဂိမ်းအပေါ်နှစ်သက်ကြလိမ့်မည်။
ငါတို့သည်သင်တို့ယခုအချိန်တွင်အကောင်းဆုံးအရွယ်ရောက်ပြီးသူဂိမ်းကစားဆိုက်ပေါ်မှာဤသူအပေါင်းတို့သည်ဂိမ်းများကိုပူဇော်သက္ကာဘို့နေကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့ညစ်ညမ်းကမ္ဘာတွင်အတွေ့အကြုံတွေအများကြီးရှိပါတယ်,ငါတို့သည်ဝက်ဘ်ဆိုက်အောင်မြင်သောဖြစ်ရန်လိုအပ်ပါသည်အတိအကျဘာကိုငါသိ၏။ ဒါဟာလူတွေကိုစက္ကန့်အတွင်းလိုအပ်သောအကြောင်းအရာမျိုးကိုရောက်ရှိကူညီပေးပါမည်ကြောင်းကိရိယာများကိုကြည့်ရှုရန်လိုအပ်သည်။ က်ေနာ္တို႔မွာအဲဒါရွိတယ္။ ဒါဟာအသိုင်းအဝိုင်းကိရိယာများလိုအပ်ပါသည်,ငါတို့သည်သင်တို့နှစ်ဦးစလုံးမှတ်ချက်အပိုင်းများနှင့်ဖိုရမ်ဆောင်ခဲ့ရမည်။ ပြီးတော့ကြော်ငြာတွေကိစ္စရှိတယ်။ ဂိမ်းဆိုဒ်အများစုသည်ကြော်ငြာနှင့်အတူရန်လိုသည်။ အခမဲ့ဟန်းနီးမွန်းဂိမ်းတွင်သင်မည်သည့်ပေါ့ပ်တက်ခ်နှင့်မည်သည့်အတိုအထွာဗီဒီယိုများရှာမည်မဟုတ်ပါ။, ကျနော်တို့ကတခြားဆိုဒ်များပေါ်တွင်သင်ပြန်ညွှန်းဘယ်တော့မှနှင့်ငါတို့သည်သင်တို့၏ပလက်ဖောင်းစွန့်ခွာရန်မည်သည့်အကြောင်းပြချက်ပေးဘယ်တော့မှမ။ ထက်ပိုပြီး,ဤဂိမ်းတော်တော်လေးစွဲလမ်းများမှာ,ဒါကြောင့်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျနော်တို့တစ်နည်းနည်းနဲ့သင်မောင်းကြိုးစားသင့်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့ကဒီမှာအလုပ်ရှုပ်သငျသညျစောငျ့ရှောကျဖို့ဂိမ်းတွေအများကြီးရှိသည်,ငါတို့သည်ပုံမှန်ပိုမိုဆောင်ခဲ့ရမည်။